TRUESTORY: April 2014
လူတွေဟာ ဘီပိုးတို့ စီပိုးတို့ အေပိုးတို့ဆိုရင် ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိဘူးဆို အသည်းအသန် ကြောက်ကြလန့်ကြလေရဲ့။ ကိုယ်တို့ဆရာဝန်တွေကတော့ အရှင်းမပျောက်နိုင်တောင် ကိုယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆေးပညာအားကိုးနဲ့ လူနာရဲ့ ဝေဒနာ သက်သာအောင် ကုစားပေးလို့ရတာကြောင့် အဲ့လိုလူနာမျိုးကို ကုရမှာ တီ ဆားနဲ့တို့သလို ဖြစ်နေလေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လို့ ဆရာဝန်တော်တော်များများက ဖြစ်နိုင်ရင် “တခြားမှာ သွားကုပါလား ဟင်။” လို့ ထမင်းရည်ပူလာ
Posted by Gentle Men at 11:39 AM No comments:
(၁) အမြဲတန်း သိချင်စိတ်ကို ပြင်းပြင်နေပါစေ
(၂) ဘယ်အရာကိုမှ မိမိနှင့် မဆိုင်သလို မနေပါနဲ့
(၃) ရောက်ရာနေရာမှာ အာရုံစူးစိုက်ပါ
(၄) မှားနေတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို ပြင်လိုက်ပါ
(၅) အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိအောင် အသုံးချပါ
(၆) အသိပညာ ဗဟုသုတတွေကို ကြွယ်ဝအောင်ကြိုးစားပါ
(၇) မိမိကိုယ်ကိုယ် စည်းကမ်းတကျ ကောင်း မွန်အောင် နေ ထိုင်လိုက်ပါ
Posted by Gentle Men at 11:29 AM No comments:
အမျိုးသမီးဖြစ်သူအား ထောင်ဒဏ်(၂၇)နှစ် အမိန့်ချပြီးနောက် နာရီပိုင်းအတွင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတရားရုံးအား အနုကြမ်းစီး၍ဇနီးအား ခေါ်ဆောင်သွား
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လောက်ကိုင်ခရိုင် လောက်ကိုင် မြို့နယ် လောက်ကိုင်မြို့ မြို့နယ် တရားရုံးတွင် လောက်ကိုင်တရား ရုံးမှ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှု တို့ဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့် ကိုးကန့် အမျိုးသမီးဖြစ်သူအား ထောင်ဒဏ် (၂၇)နှစ်ကျခံရန် ယခုလ ၁ဝရက် မွန်းလွဲ ၁၂နာရီခွဲခန့်တွင် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ အမိန့် ချမှတ်ပြီးနောက် နာရီဝက်အကြာ တွင် ယင်းအမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူက လက်နက်ကိုင်တပ်သား ငါးဦးဖြင့် တရားရုံးသို့ ဝင်ရောက် စီးနင်းကာ အမျိုးသမီးဖြစ်သူအား
Posted by Gentle Men at 11:26 AM No comments:
Posted by Gentle Men at 11:23 AM No comments:
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်တင်ထားသော စာတစ်ပိုဒ်ကြောင့် ရုံးမှအထက်လူကြီးက ဒီကနေ့သူ့ကိုခေါ်တွေ့ကာ သတိပေးသည့် အတွက် ကိုပြည့်ဖြိုးအောင် အတော်မကျေ မနပ် ဖြစ်နေပါသည်။ လူကြီးကို ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ သော်လည်း ဒီကိစ္စမှာ ၎င်းမမှားဘူးဟု အခိုင်အမာယုံကြည်ထားသည်။
‘‘ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်အကောင့်ဗျ၊ အလုပ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်ကြိုက်တာ ကျွန်တော်မြင်တာတွေကို ကျွန်တော့်ဘာသာ တင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနဲ့ ယူဆချက်တွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို အလုပ်နဲ့တွဲပြီး
Posted by Gentle Men at 11:18 AM No comments:
နိုင်ငံဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့ တစ်ခုရဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာတည်ရှိပြီး လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ အမိန့် စာတွေကို ဥပဒေနဲ့လိုက်နာစြေ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း စီရင် ဆုံးဖြတ် အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိစီရင်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အင်အားသုံး၍ ခိုင်မာစွာအတည်ပြုအောင် စုစည်းတိုက်တွန်း
ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်နှင့် လူဘောင်သစ် ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူမိုးသီးဇွန် သည် လာမည့်၂၀၁၄ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလစ်လပ်
မဲဆန္ဒ ၃၁ တစ်နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ချင်သော်လည်း ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်မရရှိသေးသည့်တွက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲနေလျက်ရှိကြောင်းဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့ကသိရသည်။
လက်ရှိတွင် မိုးသီးဇွန်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်
ဆေးဝါးအကူမလိုဘဲ၊ မိမိဖာသာ အစားအသောက်ဖြင့် ၀ိတ်ချလို့ ရတဲ့ နည်းလမ်း ကောင်းရှိပါတယ်။ ဒီနည်းက ရက်သတတ္တ (၁)ပတ်အတွင်း ကိုယ်အလေးချိန် ၆ မှ ၈ ကီလိုထိ ကျစေတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၄)ရက် နေ့ စွဲပါ American Health Digest မှာ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ www.facebook.com/health.beauty.mm။ သို့ သော် (၇)ရက်တိတိ သူ့ အညွှန်းအတိုင်း လိုက်နာနိုင်မှသာ ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာလျော့
Posted by Gentle Men at 5:20 PM No comments:
၂၀၁၀ ကနေ ...
၂၀၁၅ အထိ တာဝန်ယူနေတဲ့ ...
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ဘာလဲလို့  မေးရင် ...
ကြားခံ အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ...
ကျွန်တော် ပြောခဲ့ရေးခဲ့ဖူး ပါတယ် ...
အသွင်ကူးပြောင်းရေး အစိုးရရဲ့ ...
ရည်မှန်းချက် တာဝန်တွေထဲက တစ်ခုဟာ ...
ဘာများ ဖြစ်နိူင်ပါမလဲ ...
စနစ်တစ်ခုက စနစ် တစ်ခု …
ခေတ်တစ်ခုက ခေတ် တစ်ခု …
Posted by Gentle Men at 5:11 PM No comments:
အတွဲ(၈)၊ အမှတ်(၄၄)၊ News Watch ဂျာနယ် မျက်နှာဖုံးတွင်ပါရှိခဲ့သည့် “D.K.B.A ပြောက်ကျားဝတ်စုံဝတ် မွတ်စလင် လူတစ်စု ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကြီးဂိတ်ဝတွင် ပြည်သူအပေါ် လက်နက်များဖြင့် ရမ်းကား ” သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍
အာရှသား များက ဒီမိုကရေစီ စနစ် အပေါ် ဘယ်လို ရှုမြင် သည်ကို လေ့လာ လိုလျှင် အရှေ့ အာရှ ဒေသသည် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသတွင် အာရှ၏ သက်တမ်း အရှည်ဆုံး ဒီမို ကရေစီ နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဂျပန်ရှိသည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန် နှစ်များ နှောင်းပိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ ဘက်သို့ ကူးပြောင်း လာသော ဖိလစ်ပိုင်နှင့် တရုတ် (တိုင်ပေ) လို နိုင်ငံတွေ ရှိသည်။ စစ်အေး တိုက်ပွဲ ပြီးဆုံး ပြီးနောက် နိုင်ငံရေး စနစ် ပြောင်းခဲ့သည့် မွန်ဂို လီးယားလို့ နိုင်ငံ ရှိသည်။ အလားတူပင် တစ်ပါတီ စနစ် ကျင့်သုံး နေသည့် တရုတ် နိုင်ငံ ရှိသကဲ့သို့ တစ်နိုင်ငံ စနစ် နှစ်မျိုးမူနှင့်
Posted by Gentle Men at 9:01 AM No comments:
★ DSA NEVER SURRENDER
လက်နက်မချ - ဒေါ်စိန်အေး
ရင်ခွင်မှ သား တစ်ဦး၏ သွေးနှင့်
ရေးခြစ်ခဲ့သော DSA ကျောင်းဆင်း စိတ်ဓာတ် >★ မြန်မာနိုင်မှာ ရောင်စုံ သောင်းကျန်းသူတွေ ဗကပတွေ နေရာအနှံ့ ကြီးစိုးနေခဲ့စဉ် - ဟိုး . . မဝေးသေးတဲ့ တစ်ချိန်တုန်းကပေါ့ - - -
★ မြန်မာ့ တပ်မတော်ရဲ့ ရှေ့တန်း စခန်းကုန်း တစ်ခုမှာတော့ . . DSA ကျောင်းဆင်းခါစ ဒုဗိုလ်လေး တစ်ဦးဟာ တပ်စုလေးတစ်စုကို ကွပ်ကဲရင်း၊ အင်အားများပြားလှတဲ့ ရန်သူတွေရဲ့ တိုက်စစ်အဟုန်ကို အံတုရင်း၊ မဆုတ်တမ်း
Posted by Gentle Men at 8:25 AM2comments:
ခွေးက အနီလုံးရဲရဲလေး ကို ကြည့်လိုက်..ဟောင်လိုက်..လုပ်နေ
တာကို ရေခဲချောင်းသည်လေးက တွေ့ပြီး
ဟဲ့ ခွေး..ဖယ်စမ်း...လို့ မောင်ထုတ် လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ နီနီရဲရဲ ကျောက်ကလေးကို ကောက်ပြီး နေရောင်အောက်မှာထောင်ကြည့်တယ်။
Posted by Gentle Men at 8:22 AM No comments:
အကြိမ်ကြိမ်တရားနာရန် ဖိတ်ခေါ်သော်လည်း မလာသဖြင့် ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့သို့ သွားရောက်တရားဟော
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံအား သမ္မတလုပ်မည်ဟု ကျွေးကျော် ထားသော ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် အား တရားနာရန် အကြိမ်ကြိမ်ဖိတ်ခေါ်သော်လည်း မလာသဖြင့် အိမ်ရှေ့တွင် တရားဟောကြားခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ အသက် ၆၈ နှစ် ရှိသော်လည်း ဘာသာရေးနှင့်
Posted by Gentle Men at 8:17 AM No comments:
အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် အရွယ်လူငယ်လေး တစ်ယောက်။ ပုံစံက ခပ်အေးအေး။ ဆံပင်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဘေးခွဲ ခွဲထားတယ်။ ကားပေါ် မှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပဲ ဂျာနယ်ဖတ်နေတယ်။ ခရီးသွားမယ့်သူတွေထဲမှာ အုပ်စု တစ်စုပါတယ်။ သူတို.အုပ်စု ကားပေါ်တက်လာကတည်းက ကားပေါ်မှာ သူတို.ပဲရှိတဲ့အထာနဲ. အော်ကြီး ဟစ်ကျယ် ပြောနေကြတယ်။ တစ်ခြား ခရီးသည်တွေကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်
Posted by Gentle Men at 4:27 PM No comments:
တရုတ်ကလက်နဲ့ရေး CIA ကခြေနဲ့ဖျက် ကျားရှေ့ မှောက်ရက်လဲ သောက်ရှက်ကွဲမဲ့ ကေအိုင်အေ
ဓာတ်ပုံ- KIA ဂွမ်မော် အမေရိကန် ရောက်စဉ် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အားလုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန် တပ်မတော်ကလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထူးလိုလားပြီး လမ်းဖွင့်ပေးထားရုံမက လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ
ရွက်နေတဲ့အချိန် ပြည်သူတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မျှော်လင့်နေတဲ့ အသံများကြားနေရတဲ့အချိန် ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်သစ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေသန်းနေတဲ့အချိန်မှာ ကေအိုင်အေဘက်
Posted by Gentle Men at 4:22 PM No comments:
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေပြဌာန်းရေး
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ကန့်ကွက် တဲ့သူတွေ၊ တောင်ပြော
မြောက်ပြောနေတဲ့သူတွေ၊ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေကို ဆရာတော်သံဃာတော်တွေကို ကလော်နေတဲ့ မျက်ကန်းတွေ သေ ချာဖတ်၊ သေချာဆင်ခြင် သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်၊၊
မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာ ခုမှ ပေါ် ပင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၇၀ကျော်
Posted by Gentle Men at 4:18 PM No comments:
အကယ်ဒမီ လူမင်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်မှ အနားယူမည်
၂၀၁၄-၂၀၂၅ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ပြန်လည်ရွေးချယ်မယ့် အမှုဆောင်နေရာမှာ ၀င်ရောက် အရွေး ချယ်ခံတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းက ဒီဗွီဘီ ကို ပြောဆိုပါတယ်။
အခုလို ပြန်လည်အရွေးချယ်မခံချင်တာဟာ တခြားဝေဖန်မှုတွေ၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပဲ
တာဝန်ကနေ အပြီးအပိုင် အနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မီဒီယာမျက်နှာစာတွေမှာ အပေါစား တောရမ်းမယ်ဖွဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ဆန် အရေးအသားကအစ၊ မှန်တစ်ဝက်၊ မှားတစ်ဝက် ခပ်တည်တည် ခပ်ဖိန့်ဖိန့် ရေးသားတင်ပြချက်တွေ အလယ်၊ ဓားသွားပမာ တိကျသေသပ်တဲ့ ပညာရှင်၊ အကယ်ဒမစ်တွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေအဆုံး အခွင့်အခါသင့်ရင် သင့်သလို ပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိပါတယ်။
၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းကာလတွေမှာ အာဏာရပါတီရဲ့
ဂွမ်မော်နဲ့ဗွီအိုအေ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ဂွမ်မော်က ပြော
တယ်၊ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလမှ မြစ်ကြီး
နားဆွေးနွေးပွဲမှာ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေ ကို လျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ်ရှိ ပါတယ်။ ဒီကတိတွေရှိရက်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဆွေးနွေးမှုအပေါ် အများကြီး အနှောင့် အယှက် ပေးနိုင်ပါတယ် လို့ ပြောသွားခဲ့ပါ တယ်။ ပေးထားတဲ့ ကတိတွေကို ဖျက်တာ ဘယ်သူပါလဲ။ ကေအိုင်အေကလား၊ တပ်မတော်က လား၊ တပ်မတော်ဆိုတာ ကတိသစ္စာနဲ့
စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် မပြောပလောက်စရာ ကိစ္စအသေးအမွှားလေးတွေက လူတစ်ယောက်ကို အမြင့်တစ်နေရာရောက်ဖို့ တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ပညာရေးမှာအားသာတယ်၊ တချို့ဆိုရင် ဘ၀အကျိုးပေး ကံကောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်က စိတ်နှစ်ပြီး ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် အရာရာတိုင်းကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေက တခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ ဘာလို့
Posted by Gentle Men at 11:24 AM No comments:
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေပါဝင်လာအောင် ဆော်သြ
လာကြတာ၊ စည်းရုံးလာကြတာကို ကျွန်တော်ကိုဉာဏ် စိတ်ပူမိတယ်။ (လမ်းပေါ်နိုင်ငံရေး အလိုမရှိ၊ ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။)
တစ်ခု၊ နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်တစ်ခု ဖြစ်လာ
ယနေ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့သည် (၆၉) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဟု သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း အစိုးရက တပ်မတော်နေ့ဟု ပြောင်းလဲပြင်ဆင် သုံးနှုန်းခဲ့သည်ဟုလည်း ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြောင်းလဲခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍မူ ဤနေရာတွင် အငြင်းမပွားလိုပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ ဆိုသည်ထက် တပ်မတော်နေ့ ဆိုသည်ကို ပို၍ သဘောကျပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက
Posted by Gentle Men at 11:04 AM No comments:
Posted by Gentle Men at 10:57 AM No comments:
Mister & Miss University ပြိုင်ပွဲဝင် ကောင်းမြတ်ဟိန်းမှ မိခင်ဖြစ်သူအားအိပ်မက်ပေးပြီး သတ်သွားသူ၏ အမည်ပြောပြဟုဆို…
Grand Royal မဏ္ဍပ် ကို အမည်ပျက်စာရင်း သွင်းပြီး နောင်နှစ်များတွင် ခွင့်ပြုချက် မပေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လုံခြုံရေး နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူး ကြီး တင်ဝင်း က ပြောကြားသည်။
မြန်မာသင်္ကြန် အကြိုနေ့ တွင် Grand Royal မဏ္ဍပ်အရက် ကြော်ငြာရှိုးပွဲ၌ ထိုင်းအကမယ် များက အတွင်းခံသာဝတ်ပြီးကပြ ခဲ့၍ သင်္ကြန်ကာလနှင့်ရောကာ မြန်မာ့ရိုးရာနှင့်
အမျိုးသမီးစိတ်ပေါက်နေတဲ့ အမျိုးသားတော်တော်များများဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အထင်အရှားရှိနေပြီး
"၀" အထူးဒေသ နမ့်တစ်မြို့ မှာ ရိုက်ခဲ့တာပါ။
"၀" ဒေသလို့ သာဆိုတယ် မြို့ ထဲမှာ တရုတ်တွေချည်းပါပဲ။ တရုတ်ပြည် ဘက်က တရုတ်နိုင်ငံသား တရုတ်တွေပါ။ ၀ လူမျိုးတွေ က စစ်ဝတ်စုံတွေနဲ့အစုလိုက် အစုလိုက် တက် လာပြီး မြို့ ထဲမှာ ပစ္စည်းတွေလာဝယ်ကြတယ်။
စစ်ဝတ်စုံနဲ့ ကလေးတွေလည်း တစ်စုပြီး တစ်စု ၀င်လာတာ တွေ့ ရတော့ ရင်နာတယ်ဗျာ။ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်တောင်ကြာနေပြီလဲ။ ၀ ဒေသကို မဖွံ့ ဖြိုးသေးဘူးလို့ သာဆိုတယ် မြို့ ထဲမှာ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ကြီးတွေကတော့
ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်
ဖို့အတွက် ဒီကနေ့ ပြန်လည် ကျင်း ပ တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်း အဝေးမှာ စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အဆိုကို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ (က) လွှတ်တော်အမတ် ဦးမျိုးမင်းအောင်က ဒီနေ့ တင်သွင်းခဲ့တာပါ။ သူ့ရဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်
ကားလမ်းမကြီး ၏ ဘေးတစ်နေရာ
တွင် ယင်းကဲ့သို့ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူထား
ဆိုင်းဘုတ်နှင့်အတူ ကားလမ်းမကြီးဘေးတစ်နေရာကို သွပ်ပြား၊ ထရံ၊ ၀ါးရုံပင်များနှင့်အတူ ထွက်မရအောင် ကာရံပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ လမ်းမကြီးဘေးအခြားတစ်ဖက်ကိုလည်း ၀ါးရုံများဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းနေရာသည် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးဘက်မှတစ်ဆင့် လိုင်ဇာအနီးရှိ မဆမ်ပန်၊ ယင်းမှတစ်ဆင့်
Posted by Gentle Men at 8:16 AM No comments:
Sexy Model အဖြစ် နှင့် သာ ရပ်တည် သွား မည် ဟု ဖွင့်ဟ လာ သည့် မော်ဒယ် ဇာဇာထက် က Sexy Post များဖြင့် နိုင်ငံ တကာ ပရော် ဖက်ရှင် နယ် မော်ဒယ် ဖြစ် ကြိုးစား သွားမည် ဖြစ် ကြောင်း နှင့် Sexy Dance များကို လည်း စိတ်ဝင် စား ကြောင်း ပြော သည်။
ဇာက Sexy Dance ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ Sexy Dance ကိုလည်း နည်း နည်း သင်ထား တာ ဆို တော့ ဒါကို ကူညီပေး ပါ။ ရိုက်ပေးပါဆိုရင်တော့ ရိုက်ပေးပါတယ်။ Dance သီးသန့် တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဇာက လည်း Sexy Post နဲ့ ထိုး ဖောက်ချင်တာပေါ့။
ဇာလုပ်တဲ့ Sexy Post ဆိုရင် နိုင်ငံခြားက လူတွေကလည်း လက်ခံတယ်။ စင်ကာပူဆို တော်တော် လက်ခံတယ်။ ဇာလုပ်တဲ့ Art နည်းနည်း Sexy ကျတယ်။ မြန်မာ အမြင်နဲ့ ရိုင်းချင်ရိုင်းမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်နဲ့ မြန်မာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရဲ့ Sexy ကို နိုင်ငံ တ ကာ ကို ပြချင်တာပေါ့။
စင်ကာပူဆိုရင် သူတို့နိုင်ငံထုတ် မဂ္ဂဇင်းတွေ မှာ
သတ်သလားမသတ်ဘူးလားဆိုတာ ကို အများက ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကျနော်သိသလောက်ရှင်းလင်း
သေဆုံးသူရဲ့ အလောင်းကို ပြန်ဖော်ပြီး အ၀တ်အစားလဲပေးတဲ့ ထူးဆန်းသည့်ရွာ(ကြောက်တတ်သူများ မကြည့်ရ)
Posted by Gentle Men at 7:51 AM No comments:
ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် ရေဝေးသုဿာန် ဦးဝင်းတင်၏ အသုဘတွင် နာမည်ကြီးလိုသူများ၊ လုပ်စား
Posted by Gentle Men at 7:47 AM No comments:
၂၀၁၁ ​ခုနှစ်တုန်းက ​ထိုင်း ​အမျိုးသား ​လုံခြုံရေး ​ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကို ​ရာထူးအပြောင်းအလဲ ​လုပ်တဲ့နေရာမှာ ​၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ​အာဏာကို ​အလွဲသုံးစား ​လုပ်မလုပ်ဆိုတာနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ​ရင်လတ်ရှင်နာဝဒ် ကို ​စစ်ဆေးဖို့ ​ဖွဲ့စည်းပုံတရားရုံးက ​ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပေါ် ​အချိန်ပိုပေးဖို့ ​
Posted by Gentle Men at 12:29 PM No comments:
နေအိမ်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်အား အောင်မြေ သာစံမြို့နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးက တရားလိုပြုလုပ်ကာ မီးပေါ့ဆစွာသုံးစွဲမှုအတွက် အိမ် ထောင်ဦးစီး အနေဖြင့် ဖြေရှင်း ပေးရန် နယ်မြေပိုင်ရဲစခန်းဖြစ်သည့် အမှတ်(၁)ရဲစခန်းတွင် ပြစ်မှု ပုဒ်မ
Posted by Gentle Men at 12:22 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အင်တာနက်သတင်းများ စုစည်းပေးသူ ဒီမို
ရွက်ခဲ့သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်းဖြစ်သည့်အလျောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့များ၊
ကြီး ၄ ကြီးနှင့်စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်သို့ ပြည်သူမှတစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မီဒီယာကြီးများနဲ့ ပြည်သူလူထုကြီး ခင်ဗျား။
ကျွန်တော်ကတော့ လားရှိုးမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေတဲ့ လီဆူးတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက် ၃ ရက် ကစပြီး ဒီနေ့အထိ ကျွန်တော့်ဇာတိ တာလတ်ကျေးရွာက ကျန်ရစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အမျိုးတွေနဲ့ အခြားကျေးရွာသားတွေ လာရှိုးဘက်ကို တဖွဲဖွဲထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့
ကျွန်တော်တို့ ပလောင်ဒေသမှာ တအောင်းဝ်
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က တစ်အိမ်ထောင် လူ
" သင်္ကြန်ပြတိုက်" ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က ခင်ဝင့်ဝါ၊ နန်းဆုဦးတို့နဲ့ ရိုက်ကူးနေပြီး သင်္ကြန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ မဏ္ဍပ်စုဆောက်ကြ
တဲ့ အထဲမှာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ စိုင်းစိုင်းဆိုတဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရတာပါ။ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်ကို တာဝန် ယူပြီးလုပ်ရတဲ့အတွက်နဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ကူး မှုအကြောင်းကို
Posted by Gentle Men at 9:46 AM No comments:
UWSA နဲ့ SSA တောင်းပိုင်း တပ်ဖွဲ့ သံလွင် အနောက်ခြမ်းမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မိုင်းပန် မြို့နယ်ထဲမှာ ဝပြည်သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေး တပ်မတော်(UWSA) တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် တောင်ပိုင်း(SSA-S) တပ်ဖွဲ့တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် UWSA ဘက်က တဦးကျဆုံးပြီး တဦး ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
မိုင်းပန်မြို့ရဲ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၀ လောက် အကွာမှာရှိတဲ့ သံလွင်မြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ ဒီလ
Posted by Gentle Men at 8:42 AM No comments:
ဇာတ်ကားတွေကို ကိုယ်ကျိုး မကြည့်ဘဲ လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ရာဇာနေဝင်း
ရာဇာနေဝင်းက အနမ်းနီဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို မိုးဟေကို နဲ့ ရိုက်ကူးနေ ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးတဲ့ အခါ အိုက်တင်ကို ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်အောင် တကယ် ရိုက်ကူး တာက ပရိသတ်တွေ အားလုံးသိတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရာဇာနေဝင်း ဆိုပြီး တစ်ခေတ်တစ်ခါ အောင်မြင် ခဲ့ခြင်းလား ဆိုတော့ “ဇာတ်ကား ကတော့ ရိုက်တဲ့အခါ အတွေ့အကြုံ ရှိနေပြီဆိုတော့ ဘယ်လို ဇာတ်ရုပ်မှာ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိနေပြီလေ။ ကိုရာဇာတို့က လုပ်ရင် တကယ် လုပ်တာ။ ပရိသတ်တွေ က ဒီလူ တစ်ယောက် လိမ်နေတာလား၊ တကယ် လုပ် နေတာလားဆိုတာ အားလုံး သိတယ်လေ။ အဲဒါ ကြောင့် ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်ကို တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ကိုယ်ကျိုး မကြည့်ဘဲ
တစ်နိုင်ငံလုံးသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအကြား အတော်လှုပ်လှုပ်
ရှားရှား ဖြစ်နေကြသည်ကို သတိထားမိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သန်းခေါင်စာရင်းမကောက်ခဲ့ သည် မှာ
နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်လာပြီဖြစ်၍ သန်းခေါင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံသည် လူလတ် ပိုင်းပေါက်စတို့၌ပင် စိမ်းလွန်းလှသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများသည် အများစုသော သူတို့အဖို့ အစိမ်းဆိုမှ အစိမ်းပြင်ပြင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်း ဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှုတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်လာချိန်တွင် နယ်ပယ်အသီးသီးက အသံတွေ
Posted by Gentle Men at 7:57 AM No comments:
လုပ်ငန်းဗဟိုဌာန (MPC) ၌
မတီ (UPWC) နှင့် “တစ်နိုင်ငံလုံး
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့” (NCCT) မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာဖြင့်
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ နှင့် တိုင်းရင်း သား နှစ်ဖက်ကိုယ်
Posted by Gentle Men at 7:46 AM No comments:
လေယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုများ ဒါမှမဟုတ် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုများမှာ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ဖုို့အတွက် black-box ကိုသုံးပါတယ်… black-box မှာ အဓိက အစိတ်အပိုင်းနှစ်မျိုးပါပါတယ်… ပထမ တစ်ခုကတော့ Flight Data Recorder (FDR)လို့ခေါ်တဲ့ ပျံသန်းမှု အချက်အလက်များကိုမှတ်သားပေးနိုင်
တဲ့recorder ပါ… နောက်တစ်ခုကတော့Cockpit Voice Recorder (CVR) လို့ခေါ်ပါတယ်… ဒါကတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့လေယာဉ်မှုးနဲ့တကွအခြား အမှုထမ်းများရဲ့
Posted by Gentle Men at 7:42 AM No comments:
ဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ စကားများနဲ့ မင်းကိုနိုင် (အပိုင်း-၁)
“စကား စကား ပြောပါများ.. စကားထဲက ဇာတိပြ”
ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံတစ်ခု ရှိပါတယ်။ လူတွေ ဟာ
အမူအယာနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ထား
ပါစေ စကားများများပြောလိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ မူလဇာ
တိတွေကတော့ ပေါ်လာတာပါပဲ။ ဒီကနေ့ ကျောင်း
သားခေါင်းဆောင် လို့ လူအချို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့
Posted by Gentle Men at 8:29 AM No comments:
လမ်းထိပ်မှာ မုံ့ဟင်းခါးဆိုင် တစ်ခုရှိတယ် အရပ်ထဲက သူတွေသာမက အပြင်ကနေ ကားတွေ နဲ့လာလာစားကြတယ် ရောင်းဈေးက တစ်ပွဲကို abc ရတယ် တစ်နေ့ကို ပွဲ #### လောက် သူရောင်းနေ ရတယ် တစ်ခါတစ်ရံ အော်ဒါတွေ ရလို့ အခန်းအနားတွေသူလိုက်ရောင်းပေးရ တာတွေရှိတယ်။ သူတို့ ဝယ်တဲ့ မုံဖတ်ဆိုင် ငါးဆိုင် နဲ့ ဈေးထဲက သူတို့ သုံးတဲ့ ပစ္စည်းဝယ်တာတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ် သူတို့ အရင်းက xxx လောက်ဘဲ ရှိတာကို လာစားတဲ့သူတွေက xyz ပေးတယ်
သူ အော်ပြီး ပန်းတိုင်ဆီသို့ ညှစ်ပြေးတဲ့
D S A ကွ...........................................။
ယနေ့ စစ်တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ဗိုလ်လောင်းတွေရဲ့ တောတွင်း
နယ်ကျော်ပြေးပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့နေ့ပေါ့။ နယ်ကျော်ပြေးပြိုင်ပွဲဆိုတာက စစ်တက္ကသိုလ်ကနေတာထွက်ပြီး ရွာတွေတောတွေကိုဖြတ်ပြေး
ပြီးတော့မှစစ်တက္ကသိုလ်ကို ပတ်ပြီး ပန်းဝင်ရတဲ့ မိုင်ရှည်အပြေးပြိုင်ပွဲပါ။ အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ အောင်ဇေယျဆိုတဲ့တပ်ရင်းသုံးရင်းအပြိုင်နွှဲကြတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာ။ တနည်းဆိုရရင်မိမိရဲ့ 
Posted by Gentle Men at 7:58 AM No comments:
ရက်စက်ယုတ်မာသူအချို့ရဲ့ဘ၀ပျက်အောင် ကောက်ကျစ်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ဒီစာလေးကို ၂ မိနစ်ပဲ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ(လူတိုင်းဖတ်သင့်သည်)
လူထု ကျန်းမာရေးအထောက်အကူ ပြု အဖွဲ့ တခုက အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်စဉ် ဟာ
နိုင်ငံတော်တော် များများ မှာ စတင်ဖြစ်ပျက် နေပြီလို့ မကြာသေးခင်ကမှ
ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်. နောက် ပြီး ဆေးထိုးအပ် အကုန်လုံး ဟာလည်း တကယ်HIV positive ဖြစ်နေတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်.
ဒီလိုမျိုး ဖြစ်စဉ် တွေ ဟာ ရုပ်ရှင်ရုံ က ထိုင်ခုံမှာတင်မက ဘဲ ATM စက်တွေမှာလည်းတွေ့လာရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်. ဒါကြောင့် လည်း အဲ့လိုမျိုး အခြေနေ မကြုံတွေ့ အောင်အများသုံးတဲ့ ထိုင်ခုံ နေရာ တွေ (အထူး သဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံကထိုင်ခုံတွေ.) ကို အထုူး သတိထား ဖို့ လိုပါတယ်.
မကြာသေးခင်ကဘဲ ဆရာဝန်တယောက် က သူ့လူနာ တစ်ယောက် အဲ့လို
၁၅၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်ဖြင့် အာဆီယံ (၁၀)
အတိုင်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့
သိရှိရပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ Code ရှေ့မှာ 0100 ကို အရင်ရိုက်ပြီးမှခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယင်း Code များမှာ...
Posted by Gentle Men at 2:43 PM No comments: